चीनमा बच्चाहरु किन पछाडि प्वाल परेको पाइन्ट लगाउछन्? – Nepal Journal
चीनमा बच्चाहरु किन पछाडि प्वाल परेको पाइन्ट लगाउछन्?
यदि तपाई कुनै बच्चालाई गली, पार्क वा सपिङ सेन्टरमा खुल्लमखुल्ला शौच गरिरहेको देख्नुभयो भने तपाई के सोच्नुहुन्छ? चीनमा यस्तो देख्नु कुनै नौलो कुरा होइन । चीनमा हरेक बच्चाहरु यसरी नै दिसापिसाब गर्ने गर्दछन् ।
बच्चाहरुलाई हिडडुल गर्नमा कुनै समस्या नहोस् भन्नका लागि चीनमा अधिकाशं मानिसहरु आफ्ना बच्चाहरुलाई एक प्रकारको पारम्परिक पहिरन लगाइदिने गर्दछन् । यसलाई त्यहाँको भाषामा ‘कई डांग कू’ भन्ने गरिन्छ ।
यो एउटा खास किसिमको पाइन्ट हुने गर्दछ । जसको पछााडिको भागमा ठुलो प्वाल पारिएको हुन्छ । पहिलाको तुलनामा यस्ता पहिरनको प्रयोग कम मात्रामा हुने गरेको पाइएपनि पूर्ण रुपमा समाप्त भएको भने छैन ।
विदेशीहलाई यस प्रकारका पाइन्टको मुनै अर्थ थाहा छैन र बुझेका पनि छैनन । बाहिरबाट आएका मानिसहरुलाई लाग्छ कि यो राम्रो बानी होइन र यसबाट बच्चाहरुलाई पनि समस्या हुने गर्दछ ।
ब्राजिलबाट हालैमा बेइजिङ सरेका एक वकिलले बीबीसीलाई भने, गत हप्ता म बेइजिङको एउटा महंगो सपिङ सेन्टर गएको थिएँ । त्यहाँ मैले एउटा बच्चा झुकेर बसेको र दिसा गरिरहेको देखेँ । त्यसपछि उसकी आमाले उक्त दिसा उठाइरहेकी थिईन् । यो सबै देख्दा एकदमै अनौठो लाग्यो ।
देख्नेलाई यो जत्ति नै फोहोर लागेपनि यसको नोक्सानी मात्र छ भन्ने पनि होइन । यसका केही फाइदाहरु पनि रहेका छन् ।
चीनका मानिसहरुको सोचाई रहेको छ कि, यस्तो प्वाल परेको पाइन्ट लगाउने बच्चाहरुले छिट्टै वाशरुम प्रयोग गर्न सिक्दछन् । भने डाइपर लगाउने बच्चाहरुलाई वाशरुम जानका लागि ढिला मात्र बानी पर्छ भन्ने मान्यता उनीहरुमा रहेको छ ।
यदि बच्चाहरुले गलत ठाउँमा दिसा गर्नका लागि बस्छन् भने ठुला मानिसहरुले उनीहरुलाई रोक्ने गर्दछन् । चीनमा तीन चार महिनाको उमेरबाट नै बच्चाहरुलाई बाथरुम जान सिकाइने गरिन्छ । जबकि पश्चिमा देशहरुमा एक डेढ बर्षको उमेरबाट मात्र सिकाउने गरिन्छ ।
चिनीयाँ बच्चाको उक्त पहिरनले मानिसहरुको ध्यान यसरी तानिरहेको छ कि, इन्टरनेटमा यसबारेमा कुरा गर्नका लागि औपचारिक फोरम बनाइरहेको छ ।
‘कई डांग कू’ को लोकप्रियताको बारेमा यस कुराबाट पनि अन्दाज लगाउन सकिन्छ कि, चीनका अधिकाशं बजारमा कपडा पसलमा प्वाल नपरेको पाइन्ट नै पाउन मुस्किल हुने गर्दछ ।
यि पाइन्टहरुको बेफाइदा भनेको बच्चाहरु ठाउँ ठाउँमा घरका पर्खाल वरिपरि दिसा गरिरहेको देख्न सक्नुहुनेछ । परिणमस्वरुप सार्वजनिक स्थानमा फोहोर र गन्ध फैलिरहेको छ । जसले विभिन्न प्रकारका रोगहरु निम्त्याउने गर्दछ । यस मामलामा शहरका तुलनामा चीनमा गाउँको स्थिति एकदमै खराब रहेको छ ।
विश्वभरमा यस मुद्दामा विवाद भइरहेको छ कि ‘कई डांग कू’ को प्रयोग पर्यावरणका लागि राम्रो छ वा छैन ?
Be the first to comment on "चीनमा बच्चाहरु किन पछाडि प्वाल परेको पाइन्ट लगाउछन्?"